Fambolena milina, Atambaro mpijinja, Corn Atambaro mpijinja - Zhonglian
Atambaro Soybean mpijinja
VAOVAO HO AN'NY REHETRA FITAOVANA FAMBOLENA ilainao
Zhengzhou Zhonglian Fijinjana milina Co., Ltd dia matihanina manambatra ny mpijinja orinasa mpamokatra entana, orinasa izay mampiditra vokatra fikarohana, piesy mamokatra, milina tanteraka mivory sy ny fivarotana vokatra rehefa avy-fanompoana. Ny orinasa naorina tamin'ny 1995, ary hita teo afovoan'ny Xingyang Zhiji Road ny tanàna, Province Henan. Ny orinasa manarona ny 150.000 metatra tora-droa, ary manana mpiara-miasa mihoatra ny 500 ao anatin'izany ny mpitantana ara-teknika 56 injeniera sy teknisiana 67 mahay. Ny fitambaran'ny fananan'ny tonga US $ 60 tapitrisa izay ahitana miasa renivohitry ny US $ 25 tapitrisa. Ny orinasa ratting bola no nahavita 2a + in Industrial sy Commercial Bank.
Noho ny teknolojia ho toy ny fototra, hampitombo sy hamokatra avo-tsara entana araka ny isan-karazany ilain'ny an-tsena.
Address: North ny 310-pirenena lalana, Yulong Town, Xingyang, Zhengzhou City, faritanin'i Henan, Sina